Hizaha toetra ny mikrôninao amin'ny Internet ary tadiavo ireo torolàlana hanamboarana azy
Ny Microphone Test dia mamela anao hizaha toetra mivantana ny mikroponao ao amin'ny tranokalanao. Izy io koa dia manome torolàlana momba ny fanamboarana ny mikrophone anao amin'ny fitaovana maro sy amin'ny fampiharana feo sy horonan-tsary.
Betsaka ny antony mety tsy mandeha ny mikroponao anao. Mety hanana olana mikrô ianao raha tsy manana ny fikirana marina ilay rindranasa mampiasa mikrô. Na mety tsy hiasa mihitsy eo amin'ny fitaovanao ny mikrô, na inona na inona fampiharana ampiasainao.
Aorian'ny fanombohana ny fitsapana dia mitenena mafy amin'ny mikroponao anao ary raha mandeha izy dia ho hitanao ny onjam-peo miloko miseho ary manjavona. Raha tsy mandeha ny mikroponao anao dia hahita hafatra diso ianao. Amin'izay dia azonao atao ny manamarina ireo torolàlana hanamboarana ny olan'ny mikrô manokana momba ny fitaovanao na ny fampiharana anao.
Miaraka amin'ny fitsapana mikrônika anay dia voaro tanteraka ny fiainanao manokana: tsy misy angona audio alefa amin'ny Internet, ny feo na ny feo noraketinao dia tsy niala tamin'ny fitaovanao mihitsy. Zahao ny fizarana "Tsy misy famindrana angona" eto ambany raha te hahalala bebe kokoa.
Torolàlana hanamboarana ireo olan'ny mikrô
Mifidiana rindranasa iray sy fitaovana iray mba hitadiavana torolàlana manokana hanitsiana ireo olan'ny mikrô